Damaanada shaqada iyo horumarinta
Damaanada shaqada iyo horumarinta waa barnaamij loogu talogalay adigaaga ahaa bilaa shaqo wakhti dheer una baahan caawimaada in dib loogu noqdo nolosha shaqo. Waxaanu ku siinaynaa taageero si loo joojiyo shaqo la'aantaada.
Waa barnaamij ka kooban hawlo loo habeeyay shakhsiga iyo taageero, laguna daray inaad adigu si fir-fircoon u raadiso shaqo. Hadafku waa inaad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah uga baxdo shaqo la'aantaada.
Qofkee ka qayb-qaadan kara barnaamijkan?
Adigu waad ka qayb-qaadan kartaa damaanada shaqada iyo horumarka haddii aad bilaa shaqo ahayd wakhti dheer oo aad shaqo raadiye ahaan nooga diiwaan-gashantahay. Haddii aad tusaale ahaan ku sii socoto in lagaa saaro qasnada caymiska waa caadi in lagugu casuumo inaad ka qayb-qaadato barnaamijkan. Waxaa la mid ah haddii aad ka qayb-qaadatay qorshaha dagnaanshaha ama damaanada shaqo ee dhalinayrada xilli ah wakhtiga ugu badan, laakiin weli aad tahay bilaa shaqo si buuxda ama kala bar ahaan.
Tani ayaad samayn kartaa dhanka barnaamijkan
Adiga iyo shaqaale Xafiiska Shaqada ah ayaa qorshaynaya nooca hawlaha adiga sida ugu fiican kugu haboon si aad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u hesho shaqo ama u bilowdo waxbarasho. Waa kuwan dhowr tusaale oo hawlahan ah:
ku tababarashada shaqo
baxnaaniska ku jiheysan nolosha shaqada
waxbarasho ku jiheysan xirfad dhanka dugsiga dadka waaweyn
taageero iyo talo-bixix haddii aad ka fikirayso inaad bilowdo shirkad gaar kuu ah
Waxaanu wakhtigan oo dhan la soconaynaa sida wax kuugu socdaan oo ku siinaynaa taageerada aad u baahantahay.
Barnaamijkan wuxuu ka koobanyahay
Barnaamijkan caadi ahaan waa wakhti buuxa. Haddii aad fasax waalidnimo ku jirto wakhti kala bar ah, ama aanad shaqayn karin wakhti buuxa sababtoo ah xanuun ama hoos u dhac awooda laxaadka ah, waxaa jirta fursada ah in laga qayb-qaato barnaamijkan wakhti kala bar ah.
In laga qayb-qaato barnaamijkan dabcan maaha khasab, laakiin haddii aad ku jirto waa khasab inaad fir-fircoonaato oo raacdo qorshaha aynu ku heshiinay.
Adigaaga leh xanuun ama hoos u dhac awooda laxaadka ah waxaad heli kartaa taageero dheeraad ah
Haddii caafimaadkaaga ama hoos u dhaca awooda laxaadkaagu ay raad ku yeelanayso awoodaada inaad ka qayb-qaadato hawlaha barnaamijkan, markaasi waxaanu doonaynaa inaad noo sheegto. Waxaynu si wada-jir ah adiga kuula eegaynaa nooca taageero ee aad u baahantahay si aad u awoodo inaad ka qayb-qaadato hawlahan.
Taageerada loogu talogalay adigaaga leh hoos u dhac awooda laxaadka ah
Magdhabka marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamijkan
Marka aad ka qayb-qaadanayso damaanada shaqo iyo horumarka waxaad magdhab ka heli kartaa Qasnada Caymiska. Marka aanu kaa diiwaan-gelino barnaamijkan waxaad magdhabka ka codsanaysaa Qasnada Caymiska. Si loo helo magdhabka waa muhiim inaad raacdo qorshaha aad nala samaysay anaga. Tani waxay tahay in lagaaga baahanyahay inaad ka qayb-qaadato hawlaha aynu ku heshiinay.
Taageerada hawsha iyo magdhawga horumarka
Codso magdhabid laga helo Qasnada Caymiska
Haddii aad xanuusato ama aad daryeelayso ilmo xanuusanaya
Haddii aad xanuusato ama u baahantahay inaad guriga joogto si aad u daryeesho ilmo xanuusanaya waxaa lagaaga baahanyahay noo soo sheegto.
Samee wargelinta maqnaanshahaaga marka aad xanuusanayso
Samee wargelinta maqnaanshahaaga ee daryeelka ilmo xanuusanaya
Samee wargelinta hawlaha
Bil kastaba waa inaad dhiibtaa warbixinta hawlaha Waa muhiim si aad u hesho taageero sax ah jidkii aad ku aadi lahayd shaqo ama waxbarasho iyo si aad lacagtaada uga hesho qasnada shaqo la'anta ama Qasnada Caymiska.
Maxaa dhacaya marka aan helo shaqo?
Haddii aad hesho shaqo oo aad shaqayso wax badan oo gaarta inaad buuxiso shuruud cusub dhanka qasnada shaqo la'aanta, markaasi waa lagaa saarayaa damaanada shaqo iyo horumarka.
Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta
Maxaa dhacaya haddii si kastaba ha ahaatee aanan helin shaqo?
Haddii aanad helin shaqo ka dib 90 toddobaad oo lagu jiray damaanada shaqada iyo horumarka waxaa jira fursado dheeraad ah in la helo shaqo ama la tijaabiyo fursadahaaga, tusaale ahaan qaabka ah shaqo dheeraad ah ama tababarka shaqo.
Wakhti intee leeg ayaan ka mid ahaan karaa damaanada shaqada iyo horumarka?
Waxaad ka mid ahaan kartaa damaanada shaqada iyo horumarka ilaa iyo inta adigu aad
bilaabayso shaqo (leh ama aan lahayn taageero) ama wax baranayso wakhti buuxa, kana baxsan damaanada shaqada iyo horumarka
ku jirto fasax waalidnimo wakhti buuxa
xanuusanayso wakhti buuxa oo ka badan hal bil oo barnaamijkan aanu kugu haboonayn
buuxinayso shuruud cusub dhanka qasnada shaqo la'aanta.
Waxaad wax baran kartaa wakhti buuxa ilaa iyo lix bilood oo isla markaasna aad ka qayb-qaadan kartaa damaanada shaqo iyo horumarka oo wakhti kala bar ah.
Maxaa dhacaya haddii aan ku qornaado xanuun ama galo fasax waalid?
Haddii aad xanuusanayso wakhti dheer waxaanu isku daynaa inaanu nuxurka barnaamijkan kugu haboonaysiino si aad u awoodo inaad uga qayb-qaadato. Waa lagaa saarayaa barnaamijkan
haddii aad xanuusato wakhti buuxa in ka badan hal bil, oo barnaamijkan aan lagugu hanoonaysiin karin
Haddii aad maqantahay wakhti ka yar 12 bilood waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan.
Miyaan ku jiraa caymis?
Waxaad ku jirtaa caymisyada dhaawaca qofka iyo nolosha marka aad ka qayb-qaadanayso damaanada shaqo iyo horumarka. Xitaa shaqo-bixiyuhu wuxuu magdhabid ka heli karaa dawlada haddii wax yaala shirkada aad dhaawacdo.
Miyaan waayi karaa booskayga barnaamijkan.
Waad waayi kartaa booskaaga haddii aad si fiican uga soo bixi waydo ama aad dhibto shaqadan.
Adigaaga helay magdhabid wakhti ah 450 maalmood dhanka damaanada shaqada iyo horumarka ee aan xaq u lahayn magdhabida shaqo la'aanta sida ku cad sharciga caymiska shaqo la'aanta, waxaad xitaa waayi kartaa booskaaga haddii adigu
diido hawl ka mid ah barnaamijkan ama talaabo kale oo suuqa shaqada ah
diido shaqo haboon adigoo aan haysan sabab macquul ah
aanad samayn wargelinta hawlahaaga
aanad si joogto ah xiriir ula lahayn dhex-dhexaadiyahaaga shaqo.
Miyaan dib ugu soo noqon karaa barnaamijkan ka dib shaqo ama waxbarasho?
Waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan haddii aad ku maqnayd xanuun, fasax waalidnimo ama wax baranaysay. Laakiin maaha inaad maqnayd wax ka badan laba iyo toban bilood. Xaaladaha qaarkood waad soo noqon kartaa ilaa iyo saddex sano oo waxbarasho ah ka dib. Haddii aad soo shaqaysay oo noqotay bilaa shaqo waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan haddii aanad dib xaq u lahayn qasnada shaqo la'aanta.
Waxaad heli kartaa kaalmada dhanka kharashyada safarada
Haddii aad ka qayb-qaadato barnaamij ama baaritaan ka dhacaya meel kale oo aan ahayn halka aad degantahay waxaad heli kartaa kaalmada kharashyada safarka iyo hoyga.
Kaalmada dhanka kharashyada safarka xilliga barnaamij ama wareysi shaqo